Posted on 01 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora Testosterone Enanthate. Izvo zvine 12 Comments.
Muvara: White crystalline powder
Isu tinovimbisa kuchena kwakakwana kwezvose powders> 98%, uye nokuti isu tiri muumbi kwete mutengesi, zvinhu zvose pano zvinotengeswa zvakananga nemutengo wakaderera.
2) Mhinduro yomudzimai ichakoshesa, mazano ako achatibatsira kuti tivandudze ushumiri hwedu, uye ibasa redu kusangana nevese vatengi vanoda.
3) AASraw ndomumwe wezvokutendesa zvakakwana zve steroid zvinhu zvakagadzirwa nezvinhu zvakanakisisa zvezvinhu, kuchengeteka nekukurumidza kutumira nemabasa akanaka.
Mhinduro ye12 Comments
Unoda kutenga 100 magamu ekuedzwa E uye 100 magiramu eDaa anofanira kuziva mutengo uye ruzivo pamusoro pekutumira mari gramu. Kana kuti mutemo wemari.
Kufarira kutenga imwe Test E, Test C uye zvimwe Deca. Ndanzwa kuti varume vakachengeteka uye vane mhosva. Ndapota dzokai kwandiri.
Unoda kutenga 100 gramu te powder. Rutsva pakushanda kunze. Sezvo aishandiro akandiudza pamusoro peizvi.
Ndoda zvakadini 500mg test E powder uye ndinotenga sei
Zvakanaka, tichakurukura newe nekukurumidza.
Unoda kutenga 100 magiramu emuedzo E uye 100 magiramu eDaa anodiwa kuziva mutengo uye ruzivo pamusoro pekutumira mari gramu
Zvakanaka, tichasangana newe
Mhoroi apo. Ko ingani 100 gramu ye Testosterone Enanthate inondibhadharira? Uye zvakadini kutumira mari kuNetherlands?
Zvakanaka, ini ndichakurukura nebhokisi rako rema mail.
Chii chaizova mutengo wekutenga 25 gramu yeEanthate Test, yakatumirwa kuOntario, Canada
Ndingawana izvi muCanada
Hey ini ndinoda imwe yero e. Mu washington state iwe unogona kuitora pano here?
The Definitive Guide kwa Testosterone propionate powder kubva	Zvisikwa zvinobva kuOrlistat powder kuti uwedzere kurasikirwa-Anoshamisa mafuta kurasikirwa nemishonga iwe unofanirwa kuziva !!!